Izinto ezinxitywayo ezintsha zeSamsung: IGlass Watch esebenzayo kunye neFit | I-Androidsis
Isamsung yazisa ngeGlass Watch Active kunye neGalaxy Fit
UManuel Ramirez | | Ezinye izixhobo, SmartWatch
Isamsung isandula ukwazisa ngeGlass Watch esebenzayo kunye neGalaxy Fit, Izinto ezimbini zokunxiba ezigqibeleleyo namhlanje. Inye yenzelwe ukuba ibe yeyiphi iwotshi efanelekileyo, ngelixa iFit iya kuba yinto efanelekileyo ukunxitywa kwabo bafuna isongo esilumkileyo esirekhoda yonke imisebenzi yabo yomzimba.
2 ezinokunxitywa ezinokuhlawuliswa ngenkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo ebonwe kwiGPS S10 entsha kwaye eya kusivumela ukuba siyisebenzise njengalo mthombo wamandla esinokuthi siphinde sikulungele ukusetyenziswa kwakhona.
Isongo seSamsung inobunzima obungama-23 eegram kuphela, kwaye njenge-Watch Active, i-Galaxy Fit ayinamanzi. Okwesibini kunyukela kwiimitha ezi-5 ubunzulu. Ukunxiba ubunzima obunzima kakhulu ukuba buqhagamshelene nezinye izixhobo eziboniswe yiSamsung namhlanje, ezinjengezo Galaxy S10 kunye neGalaxy Buds.
Zombini izixhobo zinako ukurekhoda ukuya kwiindidi ezi-6 zemisebenzi eyahlukeneyo yomzimba. Aba babini banokurekhoda imijikelo eyahlukeneyo yokulala ukuze babe nengxelo yokwenyani yendlela esilala ngayo yonke imihla.
Nokuba bangafumanisa ukuba siphantsi komzuzu woxinzelelo, inika izisombululo ezinje ngomzuzu wokuphumla ukuzama ukuphefumla kwaye sithathe ithoni yethu eqhelekileyo yomzimba kunye neemvakalelo.
Las Ukucaciswa ngokupheleleyo kweGalaxy Watch Active Zizo:
I-chip ye-Exynos 9110.
I-28mm 360 × 360 AMOLED ihlala ikwisikrini.
Imemori yangaphakathi ye-4GB
I-Galaxy Fit yeyona inkulu kwiimodeli ezi-2 ze-smartband:
1, 120 × 240 screen AMOLED
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo
24 iigram zobunzima
Ngombala omnyama nomhlophe
I-Galaxy Fit E, incinci kwimisebenzi:
0,74 ″ 64 × 128 isikrini se-PMOLED
Inobunzima obuyi-15 gram.
Mhlophe, mnyama namthubi
Kufanelekile ukuqaqambisa ifayile ye- Umsebenzi omkhulu owenziwe yiSamsung kuyilo lwembonakalo Kwaye ujongano oluhambelana nento eyenzekileyo nge-UI enye. Zombini kwiGalaxy Fit nakwiGlass Watch Active, ujongano luya kunika inqaku ukuba libonelele ngamava amnandi kwaye ngaloo ndlela licebise la mathuba apho sifumana khona izaziso okanye sijonge inani lamanyathelo athathiweyo.
El IGlass Watch Active iya kufumaneka ukusuka nge-8 ka-Matshi Ngexabiso le- $ 200, ngeli xesha ukuze sikwazi ukufikelela ekuthengeni i-Galaxy Fit kuya kufuneka silinde de kube ngoMeyi 31. Izinto ezimbini ezinxitywayo ezikumgangatho ongenakuphikwa kwaye ezongeza kwizinto ezibizwa ngokuba yiSamsung "liKamva eliDibeneyo."
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » Isamsung yazisa ngeGlass Watch Active kunye neGalaxy Fit
Nantsi indlela ii-headphone ze-Samsung's Buds zeefowuni
IGolden Fold: Ifowuni ye-Samsung yokusonga ngoku isemthethweni